हात्तीको रोचक प्रजनन प्रक्रियाः चितवनमा जन्मिएको पहिलो हात्ती ‘चितवनकली’
थाहा छ–‘गर्भवती भएको २४ महिनामा छावा जन्माउँछ हात्ति’
प्रकासित मिति : २०७५ फाल्गुन २८, मंगलवार प्रकासित समय : १०:४३
चितवन । हात्तीको बच्चा जन्मदा ८० देखी १०० केजी सम्म हुने गरेको छ भने उचाई ९० देखि १०७ सेन्टिमिटर सम्म हुन्छ । चितवनको सौरहामा रहेको नेपालकै पहिलो हात्ती प्रजनन् केन्द्रमा हात्तीको प्रजनन् कसरी हुन्छ होला ? यो विषयमा रोचक छ ।
अचम्म नमान्नुहोस् चितवनमा हात्तीको प्रजनन त्यही पालिएका भालेबाट नभई निकुञ्ज भित्र घुम्दै आउँने जङ्गली हात्तीबाट हुने गरेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा घरेलु भाले हात्ती पनि छन्। तर अधिकांश ढोई चितवनका वन वनै हिँड्ने जङ्गली हात्तीसँगको संसर्गपछि गर्भवती हुने गरेका छन्।
पछिल्लो पटक सौराहको हात्तीसारमा पालिएकी लोकतन्त्रकली नाम गरेकी गर्भिणी ढोईले गत फागुन ९ गते एउटा भाले छावा जन्माइ। त्यो ढोईको स्यहारमा खटिने कर्मचारीका अनुसार चितवनमा केही वर्षअघिदेखि निकै चर्चित बनेको धुर्बे नाम दिइएको जङ्गली हात्तीसँगको संसर्गबाट लोकतन्त्रकली गर्भवती बनेकी थिइ।
त्यसरी नै चितवनको सौराहमा पालिएका हात्तीको प्रजनन हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनसँगै संरक्षणका लागि पनि हात्ती पाल्ने गरेको छ। त्यो क्रम विसं २०४२ सालबाट सुरु भएको हो।
पहिलो पटक ढोई गर्भवती भएपछि उत्साह
प्रजनन् केन्द्र स्थापना गरेको २ बर्षपछि रामपियारी भन्ने ढोईले पहिलो बच्चा जन्माएको हात्ती प्रजनन् केन्द्रको हात्ती व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख बुधन चौधरीले बताए। रामपियारी गर्भवती भएको कथा कम रोचक छैन।
त्यो ढोईलाई स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको कोशीटप्पु भ्रमणको बेला चितवनबाट लगिएको थियो। कोशीटप्पुमैँ गणेश नाम दिइएको जङ्गली हात्ती घुम्ने गर्दथ्यो।
बुधन चौधरीका अनुसार रामपियारी त्यही गणेश भन्ने हात्तीबाट गर्भिणी भएर चितवन फर्किइ। त्यसले २०४४ साल कार्तिक २५ गते एक छावा जन्माइ। त्यसको नाम चितवनकली राखियो। त्यो नै चितवनको प्रजनन केन्द्रमा जन्मिएको पहिलो हात्ती थियो।
विसं २०४० कै दशकमा नेपालले भारतलाई चारवटा गैँडा उपहार दियो। त्यसबापत नेपाललाई भारतले १६ वटा हात्ती दिएको थियो। भारतले ११ पोथी ५ भाले हात्ती दिएको थियो। तिनै हात्ती पालेर चितवनमा हात्ती प्रजनन् केन्द्र स्थापना गरियो।
अधिकारीहरूका अनुसार उक्त प्रजनन केन्द्रमा हालसम्म ४८ वटा छावा जन्मिईसकेका छन्। ती मध्ये २ वटा छावा मात्र घरपालुवा हात्तीको भएको र बाँकी वन वनै डुली हिँड्ने जङ्गली हात्तीबाट प्रजनन भएको बुधन चौधरी बताउँछन्।
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रजनन केन्द्रमा रहेका पोथी हात्तीहरु ध्रुर्बे, नाना पाटेकर, रोनाल्डो र रोमियो जस्ता नाम दिइएका जङ्गली हात्तीबाट गर्भवती हुने गरेका छन्।
रोचक प्रजनन प्रक्रिया
कर्मचारीहरू भन्छन्, जङ्गली भाले हात्तीहरु रातको समयमा हात्तीसार र वरपरका वनमा आउने गर्छन्। त्यहाँ ढोईहरूलाई प्रायः फुकाएर राखिएको हुन्छ।
त्यस्तो बेला जङ्गली भालेले पोथीहरूलाई लिएर जङ्गल जाने गर्दछन् जहाँ दुवै केही दिन सँगै रहने गर्दछन्। त्यसैक्रममा ढोईहरू गर्भिणी हुने गर्दछन्।
ढोईहरूको प्रजनन जङ्गली हात्तीबाट मात्र किन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जबाफ सजिलो छैन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पुरुषोत्तम पाण्डेका अनुसार हात्तिसारमा राखिएका हात्तीहरू प्रजनन क्रियाकलापमा त्यति सक्रिया पाइएका छैनन्।
घरपालुवा भालेबाट विरलै प्रजनन हुने गरेको छ। उनी भन्छन्, घरेलु हात्ती प्रायस् ढोईप्रति आकर्षित हुने गरेका छैनन्। पहिला थाईल्याण्ड बाट ल्याइएको वीरेन्द्रप्रसाद भन्ने भाले हात्ती थियो। त्यो हात्तीबाट भने २ वटा छावा जन्मिएका थिए। बाँकी सबैजसो जङ्गली हात्तीबाटै प्रजनन भएका हुन्।
ढोई गर्भवती भएको २२ देखी २४ महिनामा छावा जन्माउने गर्दछन्। पोथी हात्ती गर्भवती भएपछि त्यस हात्तीलाई प्रजनन् केन्द्रमा ल्याएर स्यहार सुसार गर्नुका साथै भेली र चामलको खीर, चना लगायतका पोषिलो खाना खुवाउँने गरिन्छ।
हात्तीलाई दैनिक १५ केजी धान, २५ ग्राम नुन लगायत आहारा दिने गरिन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी ४० देखी ५० वटा जङ्गली हात्ती भएको अनुमान अधिकारीहरूको छ। तर कति भाले र कति पोथी छन् भन्ने प्रष्ट छैन।
६२ वटा हात्ती चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पालेर राखिएका छन्। चितवनको प्रजनन केन्द्रमा अहिले माउ र बच्चा गरी २० वटा हात्ती रहेका छन्। ती मध्ये ४ वटा ढोई गर्भवती छन्।
घरपालुवा भाले हात्तीलाई जङ्गली हात्तीले आक्रमण गर्न सक्ने खतरा भएकाले भाले हात्ती नआउने स्थानमा घरेलु भाले हात्ती पालिएका छन्। तर ती भाले हात्तीबाट भने हात्ती प्रजनन् नहुने गरेको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पाण्डे बताउँछन्।
हात्तीहरूको सहयोगमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका हात्तीहरु गैँडा, बाघ र अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि गस्ती गर्ने गरिएको छ।
हात्ती प्रजनन केन्द्रमा जन्मिएर हुर्कैका हात्तीका छावालाई तालिमपछि देशका अन्य निकञ्जहरूमा पठाइने गरिएको छ। बीबीसीबाट